कुलमान घिसिङका उत्कृष्ट १० कामहरु ! जसले सबै नेपालीको मुहारमा खुसी ल्याईदियो । उहाँको सम्मान स्वरुप १ SHARE गरौं - itnewsnepal
१०. आर्थिक वर्ष ०७२/७३ सम्म मुलुकभित्र ८०१ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरु संचालनमा रहेको थियो। तर, अहिले ५७ प्रतिशत वृद्धि भएर १२ सय ५७ मेगावाट पुगेको छ। करिव ६ हजार मेगावाटको विद्युत खरिद संझौता भएका नीजि कम्पनीहरु तथा प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुबाट प्रवद्र्धित जलविद्युत आयोजनाहरु मध्ये करिव ३ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणधीन रहेका छन्। यो समाचार नागरिक न्युजमा लेखिएको छ ।
एसइईमा बढी नम्बर दिने भन्दै स्कुलले २० देखि ३० हजार असुले